Hafatra filohan'ny Advantista Federasiona Madagasikara afovoany | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
Hafatra filohan’ny Advantista Federasiona Madagasikara afovoany
Hafatry ny tompon'andraikitra
Fanantenana ho an’Antananarivo 2019
« FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO » – HOPE FOR TANANARIVE
FIARAHABANA NAHATRARANA NY TAONA VAOVAO 2019
Ry Fiangonana malala,
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia miarahaba anao tratry ny taona vaovao 2019. Ny Tenin’Andriamanitra izay omena ho fampaherezana amin’izao taona vaovao izao dia izay voasoratra ao amin’ny Fitomaniana 3 : 22- 24: “Ny famindrampon’I Jehovah no tsy nahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany, vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako hoy ny fanahiko ka dia hanantena Azy aho”.
Ny fikasana sy faniriana ho antsika rehetra dia ho tanteraka amintsika tokoa anie izany Tenin’Andriamanitra izany. Mbola vonona ny hiantra antsika Jehovah amin’ity taona vaovao ity. Ary mampanantena Andriamanitra ry hava-malala fa amin’ity taona 2009 ity dia vaovao ho antsika rehetra indray izany famindrampony izany.
Tsy mahafantatra ny avoakan’ny ampitso isika satria olombelona voafetra ka mitondra tahotra sy ahiahy izany eo am-piatrehana ny fiainana. Misy teny mitondra fampaherezana ho antsika anefa manoloana izany ao amin’ny Salamo 37 : 5 :” Ankino amin’I Jehovah ny làlanao. Ary matokia AZY fa hataony tanteraka izany”. Manamafy izany koa ny Ohabolana 16 : 3 :”Ankino amin’I Jehovah ny asanao dia hataony lavorary izay kasainao”.
Ry hava-malala, tian’Andriamanitra amin’izao taona vaovao izao raha hametraka ny fikasana rehetra izay tiana ho tanterahina ny isam-piangona-na, ny isan-tokantrano, ny isam-batan’olona. Ankino aminy izany rehetra izany fa hataony tanteraka sy ho lavorary avokoa. Manome toky Andriamanitra fa hiahy antsika mihoatra noho ny voro-manidina, mihoatra noho ny ahitra eny an-tsaha, eny mihoatra noho ny voninkazo.
Andeha isika hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra ka izao tombon’andro sy tombon-taona izay omeny antsika izao dia tsy ho lanilaniantsika amin’ny fihinanana sy ny fahafinaretana ary ny filan’ny tenantsika fa andeha ho laniana amin’izany fikatsahana tarigetra ambony izany.
Ry hava-malalan andeha koa isika hanapa-kevitra hitory ny Filazantsara amin’ity taona vaovao 2019 ity. Izany mantsy no fiomanana tsara indrindra izay tokony hataontsika mialoha ny fiavian’I JESOSY KRISTY. Andeha hizara ny Filazantsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra. Andeha hilaza amin’ny olona rehetra fa ho avy tsy ho ela JESOSY KRISTY. Andeha hientana amin’izany ny isam-batan’olona, ny isan-tokantrano ary ny isam-piangonana.
Eto am-pamaranana dia faniriana indrindra ary fanantenana ao anaty ao ny hiarahantsika amin’I JESOSY KRISTY any amin’ny Fanjakan’ny Lanitra mandritra ny mandrakizay. Amena! Amin’izay fotoana izay mantsy dia tsy hisy intsony andro na volana na taona fa mandritry ny mandrakizay isika miaraka AMINY!
Ny fiadanan’ny Tompo, ny fahombiazana, ny fahasalamana ary ny fitahian’Andriamanitra anie hamonto ny fiainantsika mianakavy mandritra ity taona 2019 ity!
Pasitora ANDRIAMPARATIANA Fanera
Mety hahaliana anao koa
CHANT THEME « I WILL GO » pour la Jeunesse Adventiste